Angibangisani namuntu - Boity | News24
Johannesburg - Sekuphele isikhathi eside uBonang Matheba, Minnie Dlamini, Boity Thulo, Pearl Thusi noLerato Kganyago kuthiwa bahlale bebanga izinkontileka noma imisebenzi, kodwa uThulo uthi kuyamcasula ukwaziwa njengomunye wabesifazane “abasezintweni”, kubika iTimeslive ngoLwesithathu.
Labosaziwayo abahlanu kuthiwa bahlale beqhudelana ngokuthi ubani ongcono kunomunye benjalo nalwela imisebenzi.
UBonang kuthiwa ethola inkontileka yeRevlon, wahlula uThulo naye owayeyifuna.
Muva nje, kwamenyezelwa ukuthi uLerato noBonang bazokwethula uhlelo lwe-World Cup ku-SABC1, kodwa uBonang wakhetha ukuya kwa- Supersport.
Enye impikiswano ekhona eyokuthi ubani kulaba onomzimba omuhle nomi kahle kunabanye.
UBoity utshele uNicky Greenwall, ohlelweni lukamabonakude izolo (ngoLwesili), ebusuku wathi: "Umkhakha esisebenza kuwona unjena kulezi zinsuku – kunabesifazane abaningi kodwa lokho akusho ukuthi sonke sifuna into eyodwa, futhi abantu nabezindaba abakwenza kubukeke sengathi siyaqhudelana.”
"Ngokwami anginandaba nokuba"sezintweni", ngizenzela engikwenzayo kusho uBoity.